စူးရှထက် ရဲ့ ကျေအေးပေးမှု ဟာ အရာမရောက် တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို တရားရုံး က ပြောပြီ – Shwewiki.com
စူးရှထက် ရဲ့ ကျေအေးပေးမှု ဟာ အရာမရောက် တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို တရားရုံး က ပြောပြီ
အ ဆိုတော်အစ္စဏီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ အဓမ္မပြုကျင့် နှိပ်စက်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်…တရားလိုဖြစ်တဲ့ စူးရှထက်က ကြေအေးခဲ့ပေမယ့် ခုလိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာကြောင့် အားလုံးက မထင်မှတ်ဘဲ အံ့သြကြရသလို ဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာလဲ သိချင်နေကြတာပါ…
ဒါကြောင့်မို့ ခုလို ကြေအေးပေးပေမယ့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို တာမွေမြို့နယ် သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးဝင်းဇော်ဦးက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်…
ဦးဝင်းဇော်ဦးက ဆိုရမှာ တရားလို စူးရှထက်ရဲ့ ကြေအေးလွှာဟာ အမှုရုတ်သိမ်းခွင့်ရလောက်တဲ့အထိ တင်ထားတဲ့ စာမဟုတ်ဘဲ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ပုဒ်မ ၄၉၄ အရ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ရှိခဲ့ရင်တော့ အဖြေဟာ တမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
စူးရှထက်ရဲ့ စာဟာ ရုတ်သိမ်းခွင့်ရလောက်တဲ့အထိ တင်ထားတဲ့စာမဟုတ်တာကို ဥပဒေပညာရှင်တော်တော်များများက သိတယ်လို့လည်း သူကပြောခဲ့ပါတယ်…ဒါ့အပြင် အစ္စဏီကို တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ပုဒ်မတွေဖြစ်တဲ့ ပုဒ်မ ၃၇၆ ၊ ပုဒ်မ ၃၂၄ ၊ ပုဒ်မ ၃၂၃ တို့အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း တပေါင်းတည်း ၇ နှစ်သာချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြီး ဒါဟာ ပြစ်ဒဏ်အများကြီးလျှော့ပေးထားတာလို့လည်း ဦးဝင်းဇော်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့တာပါ…
ခုပြစ်ဒဏ်တွေအတွက် အစ္စဏီဟာ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အယူခံဝင်နိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်…ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အစ္စဏီတစ်ယောက် အယူခံဝင်ရာမှာ အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
အ ဆိုတျောအစ်စဏီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလ ၇ ရကျနမှေ့ာ အဓမ်မပွုကငျြ့ နှိပျစကျမှုနဲ့ ထောငျဒဏျ ၇ နှဈခမြှတျခံခဲ့ရပါတယျ…တရားလိုဖွဈတဲ့ စူးရှထကျက ကွအေေးခဲ့ပမေယျ့ ခုလိုထောငျဒဏျခမြှတျခဲ့တာကွောငျ့ အားလုံးက မထငျမှတျဘဲ အံ့သွကွရသလို ဘာကွောငျ့ခုလိုဖွဈရတာလဲ သိခငျြနကွေတာပါ…
ဒါကွောငျ့မို့ ခုလို ကွအေေးပေးပမေယျ့ ထောငျဒဏျခမြှတျခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကို တာမှမွေို့နယျ သတငျးနဲ့ ပွနျကွားရေးအရာရှိ ဦးဝငျးဇျောဦးက ဧရာဝတီသတငျးဌာနကို ပွောပွခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ…
ဦးဝငျးဇျောဦးက ဆိုရမှာ တရားလို စူးရှထကျရဲ့ ကွအေေးလှာဟာ အမှုရုတျသိမျးခှငျ့ရလောကျတဲ့အထိ တငျထားတဲ့ စာမဟုတျဘဲ ရာဇဝတျကငျြ့ထုံး ပုဒျမ ၄၉၄ အရ ဆောငျရှကျနိုငျခွငျး မရှိခဲ့ဘဲ ရှိခဲ့ရငျတော့ အဖွဟော တမြိုးဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ….
စူးရှထကျရဲ့ စာဟာ ရုတျသိမျးခှငျ့ရလောကျတဲ့အထိ တငျထားတဲ့စာမဟုတျတာကို ဥပဒပေညာရှငျတျောတျောမြားမြားက သိတယျလို့လညျး သူကပွောခဲ့ပါတယျ…ဒါ့အပွငျ အစ်စဏီကို တရားစှဲဆိုခံထားရတဲ့ ပုဒျမတှဖွေဈတဲ့ ပုဒျမ ၃၇၆ ၊ ပုဒျမ ၃၂၄ ၊ ပုဒျမ ၃၂၃ တို့အတှကျ ပွဈဒဏျကိုလညျး တပေါငျးတညျး ၇ နှဈသာခမြှတျခဲ့တယျလို့ ဆိုခဲ့ပွီး ဒါဟာ ပွဈဒဏျအမြားကွီးလြှော့ပေးထားတာလို့လညျး ဦးဝငျးဇျောဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြကို ဧရာဝတီသတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့တာပါ…
ခုပွဈဒဏျတှအေတှကျ အစ်စဏီဟာ ရကျပေါငျး ၃၀ အတှငျး အယူခံဝငျနိုငျတယျလို့လညျး သိရပါတယျ…ဒါကွောငျ့ ပရိသတျကွီးတို့လညျး အစ်စဏီတဈယောကျ အယူခံဝငျရာမှာ အဆငျပွမှေုတှနေဲ့ ကွုံရပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..
ကျွတ်ကျွတ် အိပ် အ စား ခြင်းတောင်းတွေ ခွက်တွေ နဲ့ ပဲ ဈေးဝယ်ထွက်နေရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ က လူတွေ
အ ဆိုတော်အစ္စဏီ ထောင် ဒဏ်ကျခံရ တဲ့အ ပေါ် ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာ တဲ့ မော်ဒယ်စူးရှထက် (ရု့ပ်သံ)